Sei Kusarudza Dehumidifier?
Sei Kusarudza Dehumidifier? Advanced Michina kukura kwete chete anomhanyira mberi reSosaiti mberi asi anomutsawo kwevanhu yokuzvigadzirisa ruzivo. Ndiko kuti, yakakwirira kushanda dehumidifier anogona kubatsira vanhu vane zvakawandisa mwando Kubviswa uye overheads rutapudzo panguva imwe chete. Akadai chivako zvinhu uye chinoumba spoilage anokonzerwa zvakawandisa mwando izvo zvose kubudisa zvisingagamuchirwi mari. Zvakawandisa mwando unonyanyozivikanwa chakakonzerwa namaneja vanhu kubasa akakwirira uye zvipenyu dzezvimwe. Kare, vanhu vanoona izvi S. ...Read more »
Kutenga Guides ose Dehumidifiers
Kutenga Guides pamusoro Dehumidifiers Kana uchisarudza dehumidifier kudzivirira nzvimbo yako kubva kuunyoro kukuvadza kana dampness, kunze chigadzirwa vanokwanisa uye nzvimbo mativi footage, dehumidifiers zvikamu uyewo kukanganisa vatengi chokupedzisira sarudzo. 1. Mvura Dam Kazhinji kuzivikanwa sezvo mvura tangi kana mumugomo kana mvura tireyi vakagadzirira mukati muchina. Rinoshandiswa rokuchera zvakawandisa mwando izvo anhonga nenzira Coils vari chikwata. Nokuti mvura zvikasabudiswa, haumbofaniri kuti ainetseka, ine tangi guru mukati muchina, kana kuti tangi ruzere nemvura ...Read more »